बैंकिङ कसुरमा अहिलेसम्मकै ठूलो सजाय, कसलाई कति सजाय ? « News24 : Premium News Channel
बैंकिङ कसुरमा अहिलेसम्मकै ठूलो सजाय, कसलाई कति सजाय ?
काठमाडौं – एचएन्डबी डेभलपमेन्ट बैंक कुलेश्वर शाखामा भएको घोटाला प्रकरणमा पुनरावेदन अदालतले शाखाप्रमुख निरज नेपाललाई १३ वर्ष कैद र ८६ रोड ६६ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकेको छ । नेपालको हानिनोक्सानीबापतको बिगोसमेत जफत गर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
पुनरावेदनका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र चण्डीराज ढकालको संयुक्त इजलासले घोटालामा मुछिएका बैंकका ग्राहक मनोज चौरसियालाई पनि १३ वर्ष कैद र २९ करोड १७ लाख जरिवानाको सजाय तोकेको छ ।
उक्त मुद्दामा सरकारका तर्फबाट बहस गरेका सहन्यायाधीवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले यो फैसला बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा अहिलेसम्मकै ठूलो जरिवाना र जेल सजाय रहेको बताए । ‘बिगोको हिसाब, कसुरको तौरतरिका र डिजाइनका हिसाबले पनि बैंकिङकसुर मुद्दामा इतिसाहकै ठूलो मुद्दा हो,’ घिमिरेले भने, ‘सत्यतथ्य पत्ता लगाउन हामीले धेरै मेहनत गर्नुपरेको थियो ।’
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार बैंकिङ कसुरमा सजाय सुनाइएकाहरुमा सुरेन्द्रमान प्रधान, रसेस महेश्वरी सुखानी, अभिन्द्रकुमार श्रेष्ठ, कुमार ढकाल, राजु सुवाल रहेका छन् । यी सबै ग्राहक हुन् । त्यसैगरी बैंकका कर्मचारी मनीषा पौडेल, विनश डंगोल, परशुराम देवकोटा, रिामा केसी र निर्मल नेपाल रहेका छन् ।